DIB U EEGID: 10 waxyaabood oo laga bartay barbarihii England iyo Russia, xili Dier buuga taariikhda uu iska mid dhigay | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » DIB U EEGID: 10 waxyaabood oo laga bartay barbarihii England iyo Russia, xili Dier buuga taariikhda uu iska mid dhigay
DIB U EEGID: 10 waxyaabood oo laga bartay barbarihii England iyo Russia, xili Dier buuga taariikhda uu iska mid dhigay
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 12-06-16 6:30 AM ASC, Kullnati wacan aqristayaasheena sharafta mudan, kusoo dhawaada waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee laga soo calamadeeyay kulankii England iyo Russia.
1) England ayaa 11 xiddig ee ay kun wajahday Russia, celceliska da’doodu aheyd 25 sano iyo 293 maalmood, waxay ahayd tii labaad ugu yareyd ee tatankaan rasmi ah kasoo muuqato kadib koobka adduunka ee 2002 markasoo Sweden ay ahaayeen (25 sano iyo 206 maalmood).
2) England ayaa sameeyay sagaal shuut kulankii ka dhanka ahaa Russia qeybtii hore, waana amrkii ugu badnaa tan iyo European Championship 2004 (11 Croatia).
3) Eric Dier waa ciyaaryahankii siddeedaad ee Tottenham ee ka dhaliya gool koobka weyn oo England ciyaarayaan, waana in ka badan ciyaartoyda kooxda kale.
4) Dier goolkiisa ayaa ah kii ugu horeeyay ee laad xor ah ee England tartan weyn ku daah furaan tan iyo markii uu David Beckham Ecuador ka dhaliyay koobkii adduunka ee 2006.
5) Dier ayaa dhaliyay hal shot laad xor ah oo toos uu isugu dayay 65 kulan oo uu saftay Premier League isagoo katirsan Tottenham.
6) Harry Kane ayaa soo qaaday lix geesood ka laad ciyaarta, kaliya hal ayuuhore usoo qaaday 38 kulan oo Premier League 2015-16 uu ka saftay.
7) Kane ma laheyn wax hal taabasho ka badan isagoo kujira sanduuqa ganaaxa xulka Russia.
8) goolka soo daahay ee Vasili Berezutski ayaa ahaa bartilmaameedkii ugu horeeyay Russia isku dayaan tan iyo daqiiqadii 17-aad
9) Russia ayaa labo kulan kaliya shabaqa ilaashatay 16kii kulan ee ugu danbeyay European Championships.
10) goolka Berezutski ayaa ahaa kii ugu horeeyay abid in uu kaga dhaliyo tartamada Euro.